बिहानै घट्यो दुखद घटना, ट्रककाे ठक्करबाट ट्युसन पढ्न हिँडेका विद्यार्थीकाे गयो ज्यान. – Dainik Sangalo
बिहानै घट्यो दुखद घटना, ट्रककाे ठक्करबाट ट्युसन पढ्न हिँडेका विद्यार्थीकाे गयो ज्यान.
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष ०८, २०७८ समय: १४:१३:४५
सर्लाही, ५ पुस । सर्लाहीकाे लालबन्दीमा ट्रककाे ठक्करबाट एक बालककाे ज्यान गएकाे छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
२०७८ पुस ५ गते साेमवार पूर्व पश्चिम लाेकमार्गस्थित लालबन्दी नगरपालिका-९, मा ट्रककाे ठक्करबाट चन्द्रनगर गाउँपालिका-१, रतनपुर निवासी १७ वर्षका दिपेन्द्र यादवकाे ज्यान गएकाे हाे । उनलाई ना३ख ७९९० नम्बरकाे ट्रकले ठक्कर दिएकाे इलाका प्रहरी कार्यलय लालबन्दीले जनाएकाे हाे ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
ट्रककाे ठक्करबाट ट्युसन पढ्न हिँडेका बालककाे घटनास्थलमै ज्यान गएकाे थियाे । यादव लालबन्दी नगरपालिकास्थित जनज्याेति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्यनरत थिए । बालककाे शव जिल्ला अस्पताल मलंगवामा परीक्षणपछि आफन्तकाे जिम्मा लगाइएकाे छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
घटनालगत्तै स्थानीय र विद्यार्थीकाे समूहले केहीबेर पूर्व पश्चिम लाेकमार्गमा टायर बालेर अवरूद्ध गरेका थिए । सबैलाई सम्झाइ बुझाई गरेर सडक सुचारू गरिएकाे प्रहरीले जनाएकाे छ । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
Last Updated on: December 23rd, 2021 at 2:13 pm